Cooling Cooler For Power Inverter China Manufacturers & Suppliers & Factory
Cooling Cooler For Power Inverter - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 24 vokatra ho an'ny Cooling Cooler For Power Inverter)
Kofehy ho an'ny Power of High Speed ​​Train Anarana simika: Perfluorohexene Fluorocarbon hihena antonony andian-dahatsoratra dia Perfluorinated rano akora, izay manana dielectric avo. I T C ooling ny hafanana-niteraka ny fiaran-dalamby haingam-pandeha inverter. Ny tsy fahampian'ny entona simika, dia azo...
Fahafo-menaka mitera-menaka ala-foroka
Fahafo-menaka mitera-menaka ala-foroka ny fiovan'ny fizotran'ny rano mihena ny rano mangatsiaka ampiasaina amin'ireo mpizara ivotoerana data dia tsy mila fampangatsiahana rivotra. izay mampihena be ny fanjifana fahefana amin'ny efitrano informatika. Ny mampiavaka ny takelaka dielectric : * Solon'ny...
120ML Anti-Fogging Agent for Glasses
Coating for Protection Auto
Agent for Interior Designers
Fanafody hydrofluoro eten for pharmaceutical intermediate
Hydrofluoro etereta-totozy fanadiovana ho an'ny Pharmaceutical intermediate HFE hydrofluoroether fanadiovana ny tontolo manodidina ny tontolo iainana, manana ODP ny sandan'ny 0 sy ny ambany ambany GWP ambany. Fanafody hydrofluoro ety dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy...
Vahaolana tsy misy loko sy tsy misy fanafody ho an'ny loko aforitra
Vahaolana amin'ny tsy fetezana tsy manam-paharoa sy tsy misy sakafom-bolo Fanafody hydrofluoro ety dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy...
HFE hydrofluoroether tsy misy fatran-tsakafo ho an'ny loko aforitra
HFE hydrofluoroether tsy misy biriky tsy misy pentina ho an'ny lantihy Hydrofluoroether Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany. Ny hexafluoropropyl methyl ether dia ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana...
HFE Environmentally-friendly cleaner for crystal liquid
HFE Hydrofluoroether Solon'ny fanadiovana ny tontolo iainana ho an'ny kristaly mangatsiaka Fanafody hydrofluoro ety dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent...
Fiarovan'ny fluorocarbon anti-water for Keramika
Fiarovan'ny fluorocarbon anti-water for Keramika [ Fanoroana ny solosaina manohitra ny solosaina ] Bika Aman 'endrika: Colorless na mavo rano mangarahara AF dia karazana fluorocarbon coating, izay nanomana ny specia lly narafitra fluorosilicon Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany...
Abrasion Resistance fluorocarbon coating for ceramics
Abrasion Resistance fluorocarbon coating for ceramics [ Karazan-tsakafo ] Bika Aman 'endrika: Colorless na mavo rano mangarahara AF dia karazana fluorocarbon coating, izay nanomana ny specia lly narafitra fluorosilicon Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany tsara amin'ny tsy...
Aforatry ny tsy manam-pahaizana AF ho an'ny Keramika
Aforatry ny tsy manam-pahaizana AF ho an'ny Keramika [ Famaritana momba ny fanadiovan-tsakafo ] Bika Aman 'endrika: Colorless na mavo rano mangarahara AF dia karazana fluorocarbon coating, izay nanomana ny specia lly narafitra fluorosilicon Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany...
Anti-stain AF Coating Material for Ceramics
Anti-stain AF Coating Material for Ceramics [ Tolo-tsarimihetsika simika ] Bika Aman 'endrika: Colorless na mavo rano mangarahara AF dia karazana fluorocarbon coating, izay nanomana ny specia lly narafitra fluorosilicon Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany tsara amin'ny tsy...
Anti-Water AF Nano Coating for Ceramics
Anti-Water AF Nano Coating for Ceramics [ Fanoroana ny solosaina manohitra ny solosaina ] Bika Aman 'endrika: Colorless na mavo rano mangarahara AF dia karazana fluorocarbon coating, izay nanomana ny specia lly narafitra fluorosilicon Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany tsara...
Fanamafisana ny fikojakoana AF aforitra ho an'ny fanorenana Glass
Fanafody fanala amin'ny alàlan'ny lamba fanorenana fanorenana fanorenana fanorenana [ Fanoroana ny solosaina manohitra ny solosaina ] Bika Aman 'endrika: Colorless na mavo rano mangarahara AF dia karazana fluorocarbon coating, izay nanomana ny specia lly narafitra fluorosilicon Resin. Ny fiakaran'ny...
Good Optical Performance AF ho an'ny sarimihetsika
Good Optical Performance AF ho an'ny sarimihetsika [ Sarintan-tsarobidy ] Bika Aman 'endrika: Colorless na mavo rano mangarahara AF dia karazana fluorocarbon coating, izay nanomana ny specia lly narafitra fluorosilicon Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany tsara amin'ny tsy...
Anti-stain Coatings for Screen Touch Screen
Anti-stain Coatings for Screen Touch Screen [[Nano mitaratra ny tontolon'ny Touch Phone:] Bika Aman 'endrika: Colorless na mavo rano mangarahara AF dia karazana fluorocarbon coating, izay nanomana ny specia lly narafitra fluorosilicon Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany tsara...
Good Performance ho an'ny Optical Lenses
Good Performance ho an'ny Optical Lenses [ Fanoroana ny solosaina manohitra ny solosaina ] Bika Aman 'endrika: Colorless na mavo rano mangarahara AF dia karazana fluorocarbon coating, izay nanomana ny specia lly narafitra fluorosilicon Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany tsara...
Cooling Cooler For Power Inverter Cooling Cooler for Power Inverter Dielectric Coating for Power Inverter Cooling for power plant Fluorocabon Coolant for Controller Inverter Cooling Cooler ho an'ny Data Center Server Stability Dielectric Coating for Power Inverter Solvent for Inverter